Arteta oo ka hadley guuldaradii 3-0 ee ka soo gaartay Aston Villa. –
Home WARARKA CIYAARAHA Arteta oo ka hadley guuldaradii 3-0 ee ka soo gaartay Aston...
Arteta oo ka hadley guuldaradii 3-0 ee ka soo gaartay Aston Villa.
Tababaraha Arsenal, Mikel Arteta, ayaa weeraray ciyaartoydiisa ka dib guuldaradii 3-0 ee ka soo gaartay Aston Villa Axadii.
Gunners ayaa ugu cadcad inay badiso kulankooda gurigooda, ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen Manchester United isbuucii hore.
Si kastaba ha noqotee, waxay dib ugu laabteen goolkii Bukayo Saka, ka hor inta Ollie Watkins uusan shabaqa soo taaban qeybtii labaad ee Emirates.
Waxay aheyd guuldaradii afaraad ee Arsenal sideed kulan, Arteta wax cudurdaar ah uma sameynin kooxdiisa kadib, laakiin wuxuu qaatay masuuliyada buuxda ee guuldarada.
Wuxuu yiri: “Marka hore waxaan ugu hambalyeynayaa Aston Villa qaabkii ay u ciyaareen iyo guushii ay gaareen.
“Intaa kadib sida iska cad waxaan qabanaa heer ka hooseeya heerarkeena waana inaan dhahaa tan iyo markii aan ahaa tababaraha Arsenal waxay aheyd markii iigu horeysay ee aan arko anagoo ciyaareyna kooxna ma nihin.
Waxaan qaadayaa masuuliyad buuxda. Ciyaarta kuma aanan bilaabin sifiican. Waxaan uga baxnay xaalada VAR xaalada Offside darteed, laakiin si toos ah kadib waxaan luminay dhamaan tartamadii, dhamaan jilaayaashii, waan kufiicnayn kubada, markaan abuurnay fursado aan goolal ku dhalinno xitaa maysan bartilmaameedsanin goolka . ”